Fuzzballs စျေး - အွန်လိုင်း FUZZ ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Fuzzballs (FUZZ)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Fuzzballs (FUZZ) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Fuzzballs ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
FUZZ – Fuzzballs
Market ကဦးထုပ်: $22 955.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Fuzzballs တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Fuzzballs များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
FuzzballsFUZZ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0038FuzzballsFUZZ သို့ ယူရိုEUR€0.0032FuzzballsFUZZ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00289FuzzballsFUZZ သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00346FuzzballsFUZZ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0341FuzzballsFUZZ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0238FuzzballsFUZZ သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0842FuzzballsFUZZ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0141FuzzballsFUZZ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00505FuzzballsFUZZ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00526FuzzballsFUZZ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0851FuzzballsFUZZ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0295FuzzballsFUZZ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0203FuzzballsFUZZ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.285FuzzballsFUZZ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.641FuzzballsFUZZ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0052FuzzballsFUZZ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0057FuzzballsFUZZ သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.118FuzzballsFUZZ သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0264FuzzballsFUZZ သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.401FuzzballsFUZZ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩4.5FuzzballsFUZZ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.45FuzzballsFUZZ သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.279FuzzballsFUZZ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.105
FuzzballsFUZZ သို့ BitcoinBTC0.0000003 FuzzballsFUZZ သို့ EthereumETH0.00001 FuzzballsFUZZ သို့ LitecoinLTC0.00006 FuzzballsFUZZ သို့ DigitalCashDASH0.00004 FuzzballsFUZZ သို့ MoneroXMR0.00004 FuzzballsFUZZ သို့ NxtNXT0.272 FuzzballsFUZZ သို့ Ethereum ClassicETC0.000528 FuzzballsFUZZ သို့ DogecoinDOGE1.06 FuzzballsFUZZ သို့ ZCashZEC0.00004 FuzzballsFUZZ သို့ BitsharesBTS0.144 FuzzballsFUZZ သို့ DigiByteDGB0.139 FuzzballsFUZZ သို့ RippleXRP0.0123 FuzzballsFUZZ သို့ BitcoinDarkBTCD0.000128 FuzzballsFUZZ သို့ PeerCoinPPC0.0131 FuzzballsFUZZ သို့ CraigsCoinCRAIG1.69 FuzzballsFUZZ သို့ BitstakeXBS0.158 FuzzballsFUZZ သို့ PayCoinXPY0.0646 FuzzballsFUZZ သို့ ProsperCoinPRC0.465 FuzzballsFUZZ သို့ YbCoinYBC0.000002 FuzzballsFUZZ သို့ DarkKushDANK1.19 FuzzballsFUZZ သို့ GiveCoinGIVE8.01 FuzzballsFUZZ သို့ KoboCoinKOBO0.832 FuzzballsFUZZ သို့ DarkTokenDT0.0035 FuzzballsFUZZ သို့ CETUS CoinCETI10.69
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 06 Aug 2020 18:15:02 +0000.